सम्पति हराए कमाउन सकिन्छ तर, संस्कृति हराए सर्वस्व हराउछ, तपाईं हराउनुहुन्छ ! « Online Tv Nepal
सम्पति हराए कमाउन सकिन्छ तर, संस्कृति हराए सर्वस्व हराउछ, तपाईं हराउनुहुन्छ !
Published :5March, 2020 1:33 pm
यतिसम्मकि देश हिन्दु रास्ट्र हुदा पनि देशको राजधानी मै मस्जिद थियो जुन विश्वभरिमानै एउटा अनौठो थियो आश्चर्य थियो । नकोही मुस्लिमलाइ घृणा गर्थे न उनिहरुलाइ कुनै शंकाले हेरिन्थ्यो । मात्र उनिहरु नेपालि मुस्लिम थिए। अझ राजाबाटै मक्का मदिनामा हज गर्न उनिहरु विशेष बिदाइ पाउथे । देशमा धार्मिक सहिष्णुकको अवस्था थियो ।
हिन्दु बुद्धिष्ट र किरात नेपाली भुमिको मौलिक धर्म थियो छ र रहिरहनेछ। यी तीन सबै ॐकार परिवारको धर्म हुन ।शिव र पार्वती जस्लाइ हिन्दुहरु भगवान मान्छन ठिक त्यही भगवानलाइ किरात समुदायमा सुम्निमा र पारोहाङको नामले चिनिन्छ। किरातको बुढासुब्बा र पाथिभरामा सबै हिन्दु बुदिस्ट जान्छन पूजा गर्छन् कस्तो सद्भाव थियो।